रोचक जानकारी – Page 25 – MeroJilla.com
केटि नपाएपछि बालकनै बेच्न थाले दलालले Sunday, March 30th, 2014
दीपक अनुरागी आचार्य कपिलवस्तु, चैत १६ महिलाहरु बेचिएको घटना नौलो होइन, तर पुरुष बेचिएको घटना सुन्दा भने अनौठो लाग्नु स्वभाविक हो । दलालहरुले धन कमाउने चक्करमा महिला नपाएपछि यतिबेला पुरुषलाई समेत बेच्न बाँकी राखेनन् ।यस्तै केही समयअघि सर्लाहीका एक बालक बेचिएको घटना चर्चामा आएको छ । गत ६ महिना अघि सर्लाही जिल्ला पत्थरकोट ६ बस्ने जडसिंह माझीका १५ वर्षीय छोरा गणेश माझी एक..
अभिनेत्रीबाट एक्कासी पोर्नस्टार ! Friday, March 28th, 2014
मिरान्डा खेर अष्ट्रेलियाकी मोडल हुन् । उनी केही वर्षयता विकनीमात्रै लगाएर फोटो सुट गर्दै आएकी थिइन् ।हालै भने उनले एडल्ट इन्टरटेनमेन्टको भी म्यागेजिनमा फोटो सुट गराइन्, स्तन नै देखाएर । यसपछि मिरान्डा पार्ने स्टार बन्न लागेको धेरैले बताएका छन् । यसअघि सिक्सियोलिना पनि भी म्यागेजिनमा नग्न तस्बिर सुट गराएर पोर्न फिल्ममा लागेकी थिइन् । हंगेरीकी सिक्सियोलिना विवाह पश्चता..
मान्छेका शौख पनि अचम्मकै हुन्छन् । आफुलाई प्रकृतिवादी भन्ने न्युजिल्याण्डको एक जोडीले निर्वस्त्र विवाह गरेको छ । बेहुला बेहुलीले सरीरमा कुनैपनि कपडा नलगाएको उक्त बिहे समारोहमा केही जन्ती र पाहुना समेत नांगै थिए । गएको जनवरी ५ का दिन विलिंगटन स्थित प्रकृतिवादी क्लबमा सम्पन्न भएको उक्त विवाह समारोहमा यसरी नांगै बिहे गर्ने जोडी हुन् निक र विन्डी लोवे । समाचार अनुसार त्यस..
कुखुराको अण्डाको सहाराले एक महिला बनिन आमा Wednesday, March 26th, 2014
आमा बन्ने कसलाइ रहर कसलाई हुँदैन होला र ? तर, आफ्नो पेटमा रहेको गर्भ एकपटक मात्रै होइन ६ पटक सम्म खेर गएपछि एक महिलाले कुखुराको अण्डाको सहाराले आमा बन्ने सौभाग्य पाएकी छन । व्रिटेनको लिवरपुलकी २३ वर्षे महिला लारैन डोनाको पेटमा गर्भ त रहन्थ्यो तर केहि समयमै खेर जान्थ्यो । लारेन १७ वर्षकी हुँदा उनको पहिलो गर्भ खेर गएको थियो । हरेक पटक गर्भ खेर गएपछि डाक्टरको सल्लाह लिन पुगेकी उनको..
कहिले काँही श्रीमान श्रीमतीबीच भएको भगडामा एकले अर्कोलाई भन्न नपर्ने कुराहरु पनि भनिन्छ । जसका कारण एक छिनको झगडाले दुवैजनालाई जीवनभर एक अर्का देखि टाढा रहेर बाच्नु पर्ने अबस्था आउँछ । त्यसैले झण्गा हुँदा यस्ता कुरा निकाल्ने बानी छ भने तयसलाई तुरुन्तै हटाउने बानी गनुृस । १. यो तिम्रो गल्ती हो: झगडा भएको बेला एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर सन्तुष्ट हुनु हरेक मान्छेको स्वभाव नै..
महिला कति वर्षको उमेरमा छँदा उनको कपाल सबैभन्दा सुन्दर बन्छ होला ? यसको उत्तर यसै भन्न गाह्रो छ । तर पछिल्लो एक अध्ययनले भने २९ वर्षको उमेरमा महिलाको कपाल सबैभन्दा सुन्दर र सेक्सी हुने दाबी गरेको छ । बेलायतमा गरिएको एक सर्भेक्षणले यस्तो तथ्य पत्ता लगाएको हो । अध्ययन अनुसार २ दशक उमेरको उत्तरार्धतिर महिलाले आफ्नो कपालमाथि प्रयोग गर्न छाड्छन् जसका कारण कपाल सुन्दर बन्छ । बिस..